Izibopho ezingaphezulu zeCoca-Cola Zibonakala Ngaphakathi Izikhungo Zase-US Zokulawulwa Kwezifo - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Izifo Ezihlobene Nokudla
Izibopho ezingaphezulu zeCoca-Cola Zibonakala Ngaphakathi Izikhungo Zase-US Zokulawulwa Kwezifo
Posted on August 1, 2016 by UCarey Gillam
NgoJuni, uDkt.Barbara Bowman, isikhulu esisesikhundleni esiphakeme ngaphakathi kweCenters for Disease Control and Prevention, ngokungalindelekile i-ejensi, ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuvela kolwazi olukhombisa ukuthi ubelokhu exhumana njalo nommeli ohola phambili weCoca-Cola efuna ukuthonya iziphathimandla zezempilo zomhlaba ezindabeni zenqubomgomo kashukela neziphuzo.
Manje, ama-imeyili amaningi asikisela ukuthi esinye isikhulu se-CDC esingumakadebona sinobudlelwano obufanayo nakulesi sikhondlakhondla sophuzo oluthambile lomhlaba. UMichael Pratt, Umeluleki Omkhulu Wezempilo Yomhlaba wonke e-National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion e-CDC, unomlando wokukhuthaza nokusiza ekuholeni ucwaningo oluxhaswe yiCoca-Cola. UPratt usebenza futhi neqembu elingenzi nzuzo lenhlangano elisungulwe yiCoca-Cola elibizwa nge-International Life Sciences Institute (ILSI), ama-imeyili atholakele ngezicelo zeFreedom of Information ayakhombisa.
UPratt akazange aphendule emibuzweni ngomsebenzi wakhe, okubandakanya isikhundla njenge- uprofesa e-Emory University, eyunivesithi yocwaningo yangasese e-Atlanta etholile izigidi zamadola kusuka kuCoca-Cola Foundation kanye ngaphezulu kwe- $ 100 million kusuka kumholi odumile wesikhathi eside weCoca-Cola uRobert W. Woodruff nomfowabo kaWoodruff uGeorge. Impela, ukwesekwa kwezezimali kukaCoca-Cola ku-Emory kunamandla kangangokuba inyuvesi ithi kuwebhusayithi yayo ukuthi “kubhekwa njengomoya ongemuhle wesikole ukuphuza ezinye izinhlobo zesoda ekhampasi.”
Okhulumela iCDC uKathy Harben uthe uPratt ubekade “ethunyelwa okwesikhashana” e-Emory University kodwa umsebenzi wakhe e-Emory “usuphothuliwe futhi manje usesebenze kwiCDC.” Amawebhusayithi e-Emory University asakhombisa uPratt njengamanje onikezwe njengoprofesa lapho, noma kunjalo.
Akunandaba, ucwaningo lweqembu lokukhuthaza abathengi i-US Right to Know lukhombisa ukuthi uPratt ungesinye isikhulu esiphakeme se-CDC esinobudlelwano obuseduze neCoca-Cola. Futhi ochwepheshe emkhakheni wezokudla bathi ngenxa yokuthi inhloso ye-CDC ivikela impilo yomphakathi, kuyinkinga ngezikhulu ze-ejensi ukuthi zisebenzisane nesithakazelo senkampani esinomlando wokubukela phansi izingcuphe zezempilo zemikhiqizo yaso.
"Lokhu kuhlangana kuyakhathaza ngoba kusiza ekuhlinzekeni ukuba semthethweni kwezimboni," kusho u-Andy Bellatti, isazi sokudla kanye nomsunguli weDietitians for Professional Integrity.
Omunye umyalezo obalulekile uCoca-Cola abelokhu ewuphusha uwukuthi "Amandla Ibhalansi."Ukusetshenziswa kokudla neziphuzo ezinoshukela akumele kusolwe ukukhuluphala noma ezinye izinkinga zempilo; ukungabikho kokuvivinya umzimba yimbangela eyinhloko, inkolelo ithi. "Kunokukhathazeka okwandayo mayelana nokukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala emhlabeni wonke, futhi yize kunezici eziningi ezihilelekile, imbangela enkulu ezimweni eziningi ukungalingani phakathi kwama-calories asetshenzisiwe namakhalori asetshenzisiwe," ICoca-Cola ithi kuwebhusayithi yayo.
"Imboni kasoda izimisele ngokuphambukisa ingxoxo kude nemiphumela emibi ebhalwe kahle yeziphuzo ezinoshukela kanye nokuzivocavoca umzimba," kusho uBellatti.
Imiyalezo ifika ngesikhathi lapho iziphathimandla zezempilo ezihola umhlaba wonke zinxusa ukuthi kuqedwe ukusetshenziswa kwezidlo ezinoshukela neziphuzo, kanti amanye amadolobha asebenzisa intela eyengeziwe kuma-sodas ukuzama ukudikibala ukusetshenziswa. UCoca-Cola ubelokhu elwa ngokwengxenye ngokunikela ngemali kososayensi nezinhlangano ezixhasa inkampani ngocwaningo nangezethulo zezifundo.
Umsebenzi kaPratt nemboni ubonakala uhambelana nalowo mzamo wokuthumela imiyalezo. Ngonyaka odlule uphinde wabhala naye isifundo seLatin America sezempilo nezomsocokanye namaphepha ahlobene axhaswe ngokwengxenye yiCoca-Cola ne-ILSI ukuphenya ngokudla kwabantu emazweni aseLatin America nokusungula imininingwane egciniwe yokutadisha “ngobudlelwano obuyinkimbinkimbi obukhona phakathi kokungalingani kwamandla, ukukhuluphala ngokweqile kanye nezifo ezingamahlalakhona ezihambisanayo…” noPratt ubelokhu esebenza njenge “umeluleki” wesayensi we-ILSI eNyakatho Melika, ukukhonza ekomidini le-ILSI "lokulinganisela kwamandla nokuphila okusebenzayo." Futhi uyilungu le- ILSI Research Foundation Board of Trustees Ubuye wasebenza njengomeluleki ku isifundo samazwe omhlaba sokukhuluphala kwengane uxhaswe ngabakwaCoca-Cola.
Igatsha lase-ILSI laseNyakatho Melika, amalungu alo afaka i-Coca-Cola, i-PepsiCo Inc., i-Dr Pepper Snapple Group kanye nabanye abadlali bemboni yokudla abangaphezu kweshumi nambili, ithi njengenhloso yayo ukuqhubekisa "ukuqonda nokusetshenziswa kwesayensi okuhlobene nekhwalithi yokudla okunempilo kanye ukuphepha kokutholakala kokudla. ” Kepha abanye ososayensi abazimele kanye nezishoshovu zomkhakha wezokudla babheka i-ILSI njengeqembu eliphambili elihlose ukuqhubekisela phambili izintshisekelo zomkhakha wezokudla. Yasungulwa ngumholi wezindaba zesayensi nezomthetho we-Coca-Cola u-Alex Malaspina ngonyaka we-1978. ILSI ibe nobudlelwano obude nobubheke phansi ne-World Health Organisation, esebenza ngesikhathi esisodwa eduze ne-Food and Agricultural Organisation yayo (i-FAO) kanye ne-WHO's International Agency Yezocwaningo Ngomdlavuza kanye noHlelo Lomhlaba Wonke Lokuphepha Kwezamakhemikhali
Kodwa umbiko womxhumanisi ku-WHO ithole ukuthi i-ILSI yayifaka i-WHO ne-FAO nososayensi, imali kanye nocwaningo ukuze kutholakale ukuthandwa kwemikhiqizo namasu ezimboni. ILSI nayo yasolwa ukuzama ukubukela phansi imizamo ye-WHO yokulawula ugwayi egameni lemboni kagwayi.
Ukushintshaniswa kwe-imeyili okukodwa kuka-Ephreli 2012 etholwe ngesicelo seNkululeko Yolwazi ikhombisa uPratt njengengxenye yombuthano wabaprofesa abakhulumisana noRhona Applebaum, ngaleso sikhathi owayengumphathi omkhulu wezesayensi nezomthetho eCoca-Cola, ngobunzima bokuthola ukubambisana ocwaningweni eMexico luvela ku-National Institute of Public Health yalelo zwe. Isikhungo ngeke “sidlale ibhola ngenxa yokuthi ngubani oxhasa lolu cwaningo,” ngokusho kwe-imeyili uPeter Katzmarzyk, uprofesa wesayensi yokuzivocavoca ePennington Biomedical Research Centre eLouisiana State University, othunyelwe kuleli qembu. U-Appelbaum uvikele ubuqotho balolu cwaningo futhi waveza intukuthelo ngalesi simo, ebhala ukuthi “Ngakho-ke uma ososayensi abenza kahle bethatha i- $$$ eCoke - yini? - bonakalisiwe? Ngaphandle kokuthi bathuthukisa okuhle komphakathi? ” Ekushintshaneni kwe-imeyili uPratt unikele ngokusiza “ikakhulukazi uma lezi zinkinga ziqhubeka nokuvela.”
Ama-imeyili akhombisa ukuxhumana kukaPratt no-Applebaum, ophinde wakhonza isikhathi sokuba ngumongameli we-ILSI, kuqhubeke okungenani ngonyaka wezi-2014, kuhlanganisa nokuxoxisana ngomsebenzi we “Exercise is Medicine,” isinyathelo esethulwe ngo-2007 nguCoca-Cola nokuthi wenzelwe ini UPratt usebenza njengelungu lebhodi elelulekayo.
U-Applebaum ushiye inkampani ngo-2015 ngemuva kwe- I-Global Energy Balance Network ukuthi usizile ukusungulwa kwahlolisiswa esidlangalaleni phakathi kwezinsolo zokuthi kwakuyiqembu lezinkulumo-ze zeCoca-Cola kuphela. ICoca-Cola ithulule imali elinganiselwa ku- $ 1.5 million ekusungulweni kwaleli qembu, kuhlanganisa nesibonelelo esingu- $ 1 million eNyuvesi yaseColorado. Kepha ngemuva kobudlelwano bukaCoca-Cola nale nhlangano benziwa baziwa esihlokweni se-New York Times, nangemva kokuba ososayensi abaningana neziphathimandla zezempilo zomphakathi besole inethiwekhi "ngokuthengisa umbhedo wesayensi," inyuvesi yabuyisela imali kuCoca-Cola. Inethiwekhi yahlakazeka ngasekupheleni kuka-2015 ngemuva kwama-imeyili kuvele leyo mininingwane enemininingwane ngemizamo kaCoca-Cola yokusebenzisa inethiwekhi ukuthonya ucwaningo lwesayensi ngeziphuzo ezinoshukela.
I-Coca-Cola ibikade inentshiseko ikakhulukazi kule minyaka edlule ekusebenzeni ukulwa nokukhathazeka ngokusetshenziswa kweziphuzo ezinokuqukethwe okunoshukela omningi nezixhumanisi eziphakathi kweziphuzo ezinoshukela nokukhuluphala nezinye izifo. I-New York Times yabika ngonyaka odlule ukuthi isikhulu esiphezulu seCoke, uMuhtar Kent, savuma ukuthi inkampani isetshenzisile cishe $ 120 million kusukela ngo-2010 ukukhokhela ucwaningo lwezempilo lwezifundo nokubambisana namaqembu amakhulu ezokwelapha nawomphakathi abambe iqhaza ekunqandeni ubhadane lokukhuluphala.
UMarion Nestle, uprofesa wezokudla, izifundo zokudla kanye nempilo yomphakathi eNew York University kanye nomlobi we- "Soda Politics," uthe lapho izikhulu ze-CDC zisebenzisana kakhulu nezimboni, kukhona ukungqubuzana kwengozi yenzalo iCDC okufanele iyicabangele.
"Izikhulu zezinhlaka zezempilo zomphakathi zibeka engcupheni yokuhlangana, ukubanjwa, noma ukungqubuzana kwezintshisekelo uma zinobudlelwano obusondelene nezinkampani ezinomsebenzi wokuthengisa imikhiqizo yokudla, noma ngabe ithini imiphumela yaleyo mikhiqizo kwezempilo," kusho uNestle.
Izibopho zikaPratt kuCoca-Cola ne-ILSI ziyefana nalabo ababonwa noBowman. UBowman, owaqondise i-CDC's Division for Heart Disease and Stroke Prevention, wasebenza ekuqaleni komsebenzi wakhe wokuba ngudokotela omkhulu wezokudla eCoca-Cola futhi ngokuhamba kwesikhathi ngenkathi ese-CDC ebhala uhlelo lwencwadi ebizwa nge-Present Knowledge in Nutrition njenge “incwadi ye-International Life Sciences Institute.“Ama-imeyili aphakathi kukaBowman neMalaspina akhombise ukuxhumana okuqhubekayo maqondana nezintshisekelo ze-ILSI nezimboni zeziphuzo.
Ngesikhathi sikaBowman, ngoMeyi 2013, i-ILSI nabanye abagqugquzeli bamema uBowman kanye neCDC ukuba iqhaza kuphrojekthi I-ILSI ibibambe iqhaza noMnyango Wezolimo wase-US ukusungula "i-database enezimpawu zokudla." Izindleko zokuhamba zikaBowman zizokhokhwa yi-ILSI, kusho isimemo. UBowman uvumile ukubamba iqhaza futhi iCDC inikeze ngezimali, okungenani u- $ 25,000, kuqinisekiswe uHarben, ukuxhasa iphrojekthi yedatha. Ikomidi elihola amalungu eli-15 lalo mklamo belinabamele abayisithupha be-ILSI, imibhalo ikhombisa.
Bobabili uBowman noPratt basebenze ngaphansi kokuqondisa kuka-Ursula Bauer, umqondisi weNational Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Ngemuva kokuthi i-US Right to Know imemezele ama-imeyili ngobudlelwano bukaBowman ne-ILSI neCoca-Cola, uBauer wavikela lobo budlelwano nge-imeyili kubasebenzi bakhe, uthi “akuyona into eyejwayelekile ngoBarbara - noma omunye wethu- ukuba abhalelane nabanye abanezifiso ezifanayo nasezindaweni zethu zomsebenzi…”
Noma kunjalo, UBowman umemezele umhlalaphansi ongalindelekile we-CDC ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuthi ama-imeyili enziwe emphakathini. I-CDC iqale ukuphika ukuthi isishiyile lesi sikhungo, kodwa uHarben uthe kuleli sonto kungenxa yokuthi kuthathe isikhathi "ukucubungula" uguquko lukaBowman oluya emhlalaphansi.
Ubudlelwano buphakamisa imibuzo ebalulekile ngokuthi kusondele kangakanani lapho izikhulu zomphakathi zisebenzisana nezintshisekelo zemboni ezingaphikisana nezintshisekelo zomphakathi.
U-Yoni Freedhoff, MD, uprofesa osizayo wezokwelapha emndenini e-University of Ottawa futhi ongumsunguli we-Bariatric Medical Institute, uthe kunengozi yangempela lapho izikhulu zezempilo zomphakathi zisondelana kakhulu nabadlali bezinkampani.
“Kuze kube yilapho sibubona ubungozi obukhona bokushayisana kwezimboni nezimboni zokudla kanye nempilo yomphakathi, kukhona isiqiniseko sokuthi lezi zingxabano zizothinta imvelo namandla ezincomo nezinhlelo ngezindlela eziyoba nobungani ezimbonini ezikhiqizelwa imikhiqizo yazo umthwalo zokugula lezo zincomo nezinhlelo ezifanayo kuhloswe ngazo ukubhekana, ”kusho uFreedhoff.
(Okuthunyelwe kuqala kwavela ku- I-Huffington Post )
Landela uCarey Gillam ku-Twitter: www.twitter.com/careygillam
Ukudla Okucatshangwayo, Izifo Ezihlobene Nokudla U-Alex Malaspina, UBarbara Bowman, CDC, Coca-Cola, ICoca-Cola Foundation, Iqembu likaDkt Pepper Snapple, Emory University, UGeorge Woodruff, I-Global Energy Balance Network, ILSI, ILSI Research Foundation Board of Trustees, I-International Life Sciences Institute, UMichael Pratt, Muhtar Kent, IPennington Biomedical Research Center, I-PepsiCo Inc., UPeter Katzmarzyk, ezombusazwe, URona Applebaum, URobert W. Woodruff, ushukela, University of Colorado, Ursula Bauer
Mashi 29, 2021
I-USRTK iwina umklomelo ngomsebenzi we-FOI
Amaphepha eMonsanto - Izimfihlo Eziyingozi, Ukukhohlakala Kwebhizinisi, kanye Nokufuna Komuntu Ubulungiswa
Mashi 1, 2021
I-International Life Sciences Institute (ILSI) iyiQembu Lezimboni Zokudla